दसैंमा मासुको परिकार : एक दिनमा कति मात्रामा खाने, कसरी खाने ? - Pokhara News
होमपेज-समाचार-दसैंमा मासुको परिकार : एक दिनमा कति मात्रामा खाने, कसरी खाने ?
दसैंमा मासुको परिकार : एक दिनमा कति मात्रामा खाने, कसरी खाने ?
पोखरा न्यूजअशोज २७, २०७८
पोखरा न्यूज । नेपालीको घर घरमा दसैं भित्रिसकेको छ । दसैंको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरेपछि दसैं शुरू भएको हो ।
मासुजन्य परिकारमा शरीरका लागि आवश्यक प्रोटिन प्रशस्त हुने भए पनि धेरै मासु खानु शरीरका लागि हानीकार हुने पोषणविद् अरुणा उप्रेतीको भनाइ छ । एकजना व्यक्तिले प्रतिदिन एक सय ग्रामसम्म मासु सेवन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दाबढी अस्वस्थ मानिन्छ । ‘चाडबाडमा सबै जनासँगै बसेर खानेकुरा खाने मात्रै काम हुन्छ । पकायो खायो जसले गर्दा भोजनमा सन्तुलन कायम हुँदैन्,’ उप्रेती भन्नुहुन्छ ,’ मिलाएर खायो भने मासु लाभदायक हुन सक्छ, जथाभावी खाँदा हानीकारक हुन्छ ।’